Selokhu ngasekupheleni '90s nanamuhla automakers yasekhaya "Zil" ihlangabezana ne nezikhathi ezinzima. Naphezu kwakho konke lokhu, lesi sitshalo asisho alibale ukuthuthukiswa onobuhle ezintsha iloli ngemuva kwesikhathi, kodwa kunalokho, wenza konke angakwenza ukuze eyodwa noma enye imodeli akhiqizwa chungechunge. Ngakho, amaphrojekthi yimpumelelo kakhulu "izikhathi crisis" Zil Kungashiwo kufanele kubhekwe umfuziselo nomndeni naphakathi "Bull" izimoto namaloli esindayo ngokuthi Zil-433180 (ibhodi ukuguqulwa futhi alahle amaloli). Futhi yokugcina uye kwakuqala ukwanda okukhulu ngokushesha ngemva DEBUT walo emakethe yasekhaya. Ngakho, ake sibheke kabanzi nokuthi yini Zil imodeli iloli 433180.
Ukubukeka of eseyintsha ocime yimpumelelo kakhulu, ivumelane ngisho ezikhangayo. "Anikelelwe" sokuthuthukiswa endlwaneni eyakhiwe kwaba imodeli 4331, owabekwa ngaphezulu okudayiswayo kusukela ngo-1992. Ngokuphambene, imodeli Zil-433180 iloli imzuzele ngaphezulu side-bonnet design kanye ngaphakathi, nakuba, uma ubheka eseyintsha iphrofayli, design jikelele namanje sifana yakhe endala imodeli umzalwane 4331. phambi iphinifa manje has a look zanamuhla - entsha Izinsimbi kanye bumper ingasebenza modified ukunika imoto i look ekhangayo.
Ngeshwa, ushintsho oluhle babe ukubukeka kuphela - ku cab zonke izingxenye ezithile zazifana ubudala futhi shabby, efana "donor" ngo-1992. Black leatherette izihlalo, abamnyama kudeshibhodi, ngisho koqweqwe lwawo on metal izingxenye ngesineke black kakhulu. Into kuphela eshintsha isithombe, lokhu tachometer agqamile umshini wokubonisa izinga lejubane, okuyinto ngandlela-thile ukuhlobisa ingaphakathi. Ezinye izindaba zika-Novick lifana ncamashi yesimanje kweSoviet sabasebenza kanzima, owasizalela isihloko "Zil-131".
Tipper Zil-433180 futhi Ukucaciswa
Izici eziyinhloko izinto ezintsha afihliwe ngaphansi hood. Imoto ekuqaleni unomsebenzi yesimanje Turbo injini Minsk ukukhiqizwa "MEM 260,11 D", okuhambelana ejwayelekile kwemvelo "Euro-2". I sesisonke has umthamo eside (178 amahhashi) kanye-torque engu-708 N / m. iloli Abangane abanjalo bangakwenza ungabe ekuthwaleni umthwalo ongafinyelela amathani afinyelela ku-8, ngenkathi sabafowabo Soviet Zil-130 dumper (diesel) ephakanyiswe amathani 5 kuphela ngobuningi izinto. Kuba ngempela eziningi kuyaqhubeka inkampani, ikakhulukazi ngenxa eseyintsha isondo ifomula ayiguquki - 4x2.
Naphezu kweqiniso lokuthi lo eseyintsha ipasipoti idatha ibusa mayelana 22 amalitha udizili ngayinye amakhilomitha angamakhulu, abashayeli abaningi babethi izinga wangempela petrol imayelana 19 amalitha. Lokhu kwenza iloli bahle ngokwengeziwe ngokuya nenzuzo.
Izinhlobonhlobo futhi sikhulu kakhulu isidingo Zil iloli
Kuze kube manje, okudayiswayo izinguqulo eziningana elolini. Kungaba on-ebhodini imoto, chassis (kungenziwa ifakwe i van isothermal, ifriji iyunithi, tipper umzimba noma iguqulwe ibe iloli udoti) onobuhle 433182 futhi 433180 nomunye iloli Zil uchungechunge 494582. Uma ubheka izibalo yokuthengisa, singabona ukuthi iloli it is kakhulu lesi sikhulu ngolaka. I Snag kuphela iyona abancane zokukhiqiza, ngakho ukumbona, ngisho e-Russia, awukwazi ngokuvamile, noma okungenani, ngaphansi 4331 th Zil.
Ulwazi olubalulekile kakhulu futhi ezithakazelisayo mayelana Metro Madrid